ပန်ဒိုရာ: ဘလော့ဂါများနှင့် ဟာသ
Posted by pandora at 10:54 PM
မပန်.. ဒီပို့စ်မှာ လူစုံတက်စုံပါလားး)
ဂျစ်တူး ကမောက်ကမက မပန်တို့ ဖတ်သူတွေတွက် အပန်းပြေဆေးလေး ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရလို့ ကမောက်မကဖြစ်ရကျိုးနပ်ပါတယ်လို့ တွေးမိပါကြောင်းး)
ပန်ဒိုရာတစ်ယောက် ငါ့ဆီဗုံးကို ၀င်မရှုပ် စုပ်စုပ်မြုပ်လို့
နေ၀င်မိုးချုပ်မှာ ဘယ်သူတွေနဲ့ အတင်းတုပ်နေလဲလို့ တွေးမိပြီလေ.
နိစ္စ သုခ အတ္တ….
စလေဦးပုညကပြောဖူးတယ်. ကဗျာဥာဏ်အာဘော်ကလည်း ကလော်တိုင်းထွက်သည်နှင့်တဲ့ဗျ…
ပြင်ညာချိတို့ စကားတွေကတော့ မှတ်သားလောက်ပါပေရဲ့ဗျာ.. အော် ရေးရင်းကိုနတ္တိကြီးကို တောင် လွမ်းလာပြီ.. နတ္တိဆိုတဲ့သဘောကို စကားလုံးတွေနဲ့ အားမရလို့ ကိုယ်ကိုတိုင် သရုပ်ဆောင်ပြသွား သလားမသိပါဘူး..
မောင်ရန်.. ခုတလော ကဗျာဥာဏ်တယ် ရွှင်နေပါ့လား
ကိုနတ်ကပြောခဲ့တာ ရှိခြင်းနဲ့လည်း ကျေးဇူးပြုတယ် မရှိခြင်းနဲ့လည်း ကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့။ (န + အတ္တိ ) မရှိသက်သက် မဟုတ်ပါ။ ဘလော့ဂ်ထဲမှာ သက်ဝင် လှုပ်ရှား မရှိတော့တဲ့ သဘောတစ်ခုနဲ့ ကျေးဇူးပြုသလို ကျန်ခဲ့တဲ့ ချန်ခဲ့တဲ့ ရှိနေတဲ့ အရာတွေအတွက်လည်း ကျေးဇူးပြုနေပါတယ်။
ဟေ့ ဘာပြောပြော ရယ်ရတယ်ဟေ့ ဗျဲ
ကျနော် ဒီပိုစ့်ကို ကြိုက်တယ်
Interesting conversation. Witty and smart talk. :)
ကျေးဇူးပါ.. balargout, imaginary clouds no2 & mayvelous :)
အမေမွေးကတည်းက လိုက်ပို့ခိုင်းပါရဲ့ ဒေါ်ပန်ရယ်